Amazon Associates Central Nuugista waxay u liidataa sida Guddiga | Martech Zone
John Chow dhowaan wuxuu qoray sababta uusan ugu isticmaalin Amazon suuq geyn la shaqeysa, sababta koowaad ee ah guddiyadu aad bay u hooseeyaan. Waxaan qarka u fuulayaa inaan ku biiro John sabab kale.
Amazon waxay ka dhigeysaa wax aan macquul aheyn in la isticmaalo xirmadooda Associates. Gabi ahaanba waa waalli markasta oo aan halkaas ugu tago xiriir, ma heli karo. Waa tan tusaale. Waxaan dhawaan iibsaday Dhirta: Sida Loogu Badalo Dabeecadda Weyn adoo adeegsanaya Dabeecadeena runta ah (by Calaamadee Earl) ka dib markaan ka akhriyey barta Hugh MacLeod's blog - gapingvoid.
Waxaan ku soo galaa Amazon.com Associates Central.
Waan aadaa Dhis Xiriiriyaha.
Waan xushaa Xiriirinta Alaabada maadaama aan aqaan magaca badeecada mar hore.
Waan galaa Herd oo leh qaybta wax soo saarka sida Buugaag.
Waxaan dib u helay 10 natiijooyin. 10-ka, Buugga Mark waa midka kaliya ee dhab ahaan loo yaqaan "Xer" laakiin waa lambarka 3 ee liiska. Lambarka 1aad waa Dareenka Sirta Maroodiga. Mahadsanid Amazon!
Hadda waa inaan gujiyaa "Hel HTML" oo ii keenaya bog aad u xun si aan u sameeyo xiriiriyahayga:
Haddii aan hadda doorto Xirfadlayaal-ID oo kala duwan, bogga wuxuu tirtirayaa dhammaan xulashadayda waana inaan mar kale dib u bilaabo. Arrgh.
Waan koobiyeeyaa oo waxaan ku dhajinayaa koodhka WordPress oo dhaji.
Sawirku ma muuqdo. Waxaan ogaadey in Amazon aysan ku jirin dariiqa qaraabada ah ee sawirka iyada oo loo marayo aaggooda. Waxay dib iigu soo celiyaan iimana sheegaan sababta oo ah waa inaan martigaliyaa sawirka server-kayga. Miyaad igu kaftamaysaa Miyuusan Amazon ahayn guriga S3?
Cusboonaysiinta: Haddii aad wali ku dhibtoonayso dhismaha xiriiriyeyaashaada, waxaan kugula talin lahaa inaad adeegsato Amazon Associate's SiteStripe!
Qaar ka mid ah talooyinka hagaajinta alaabada ee Amazon:
Ku dhaji foomka "Get Links" nooc ka mid ah bogga Soo Degida.
Aan u dhiso shaxanka aan jeclahay oo aan ku keydiyo koontadayda (kaliya waxaan isticmaalaa 1 qaabka).
Markii aan baaris ku sameeyo shayga, ka jawaab shaxanka HTML ee aan ugu talagalay talaabada 2)
Ha dhihin waa HTML-ka mooyee runtiina waa HTML. HTML-ka aad dhiibato kuma jiraan xuquuqda URI sawirka!
Fadlan ka qaad sawirada raadraaca sawirada xirmooyinka qoraalkaaga fudud. Geesh. Waxay kuxirantahay qaabkeyga. U fiirso hoosta halka aan ku leeyahay xiriiriyaha Amazon ee "Ajax". U fiirso farqiga u dambeeya kadib?
Tani waxay igu qaadaneysaa 20-ka daqiiqo in aan helo koodhka darn oo aan hoos ugu dhaadhaco daqiiqad ka yar. Daacadnimo dhan, uma maleynayo in nashqadeynta adeegan gacansaarka ah ay isbadashay tan iyo markii la bilaabay. Xiriiriyaha iskuxiraha xitaa wali wuxuu dhajiyaa dhabarka (Amazon - fiiri Ajax xulashada buuggaaga). Waxay ahayd mid cabsi badan maalintii 1-aad waana wax laga naxo hadda. Marka… kaliya maahan komishanku hooseeyo, interface-ka ayaa nuugaya.
PS: Xidhiidh ku socda Herd ayaa hadda lagu soo daray aniga Bogga Akhriska. Midkaan sugayaa!
Tags: Amazonamazon xiriiriye xiriiriyeamazon jaalamazon associate sitestripefadhiisid
Jun 30, 2007 at 8: 12 PM
Waxaad isku dayi kartaa qalabka 'WP plugin' ee Amazon…
Jun 30, 2007 at 8: 22 PM
Taasi waa mid ka mid ah waxyaalihii ugu fiicnaa ee aan abid arko. Nasiib darrose, waxaan adeegsadaa tifaftiraha tooska ah tan iyo markii aan ku daro qoraalo badan iyo qoraallo fara badan qoraaladayda isla markaana sheybaarku aanu is-waafaqsanayn. Waxay ahayd beta bilo badan hadda - waxaan rajeynayaa inuu ku heli karo inay la shaqeyso waxkastoo tifaftire la joogo!
Sidoo kale, qorayaal kasta oo plugin ah waa inay hubiyaan inay fiirinayaan - taasi waa mid ka mid ah qalabka ugu sarreeya!
Sidoo kale, Amazon waa inay la xiriirtaa manalang oo ay shaqaaleeyaan si ay dib ugu soo ceshadaan boggooda Associates !!! 🙂
Jul 3, 2007 markay ahayd 10:36 AM
Way kuu sahlanaan laheyd inaad isticmaasho fiiladan, xitaa markaad rakibo WP-da caadiga ah. Aniguba sidoo kale waxaan adeegsadaa tifaftiraha cad, laakiin markii la raaco WP sidoo kale waxaa ku rakiban tifaftiraha qoraalka hodanka ah. Kaliya u adeegso tifaftiraha qoraalka hodanka ah asal ahaan, oo u rog tabka si aad u aragto lambarka si aad u qabato shaqo kasta oo aad rabto. Kadib dib ugu noqo aragtida qoraalka hodanka ah si aad u daadiso oo aad u jiido walxaha amazon qoraalkaaga. Kaliya waa guji dheeri ah, ka dibna waad sii wadi kartaa adeegsiga tifaftiraha aad doorbidayso inta badan shaqadaada!
Jul 4, 2007 markay ahayd 9:53 AM
Dhibaatada haysata tifaftiraha qoraalka hodanka ah ayaa ah inay gebi ahaanba gashato wixii qoraal ah ee ku duugan qoraalka (tusaale ahaan gelinta fiidiyowga YouTube-ka).
Jul 1, 2007 markay ahayd 4:09 AM
Saamigoodu waa ilaa 70% YTD. Waa inay wax sax ah sameynayaan!
Waxaan isku dayaa inaan ka fogaado kuwa isku xirnaanta sheyga ah oo aan door bidaayo xiriir qoto dheer ama ku xirnaashada thumbnail sida aad ku sameyneyso boggaaga akhriska.
Jul 1, 2007 markay ahayd 10:57 AM
Waan ku adkayd iyaga, miyaanay ahayn? Ixtiraam badan ayaan u hayaa Amazon, Robert. Waxay wax ka beddeleen warshadaha tafaariiqda iyo qaybinta. Runtii waxaan layaabanahay in shirkad aad u horumarsan ay fiiro yar u lahaan doonto sidii loo heli lahaa boos badan oo shabakad ah.
Haddii ay horumarin lahaayeen API-kooda sida Google u leeyahay, runti waxaan u maleynayaa inay yeelan karaan koror laba-god ah iibka webka. Shirkadaha qaar waxay ku socdaan jihadaas oo Amazon waa laga badin karaa hadaanay fursad u helin inay maalgashadaan!
Jul 1, 2007 markay ahayd 9:26 AM
Waxaan isku dayay Amazon xoogaa markaan soo noqdo… Kaliya waxaan ku hayaa sanduuq yar oo raadinta ah oo ku qoran Ingiriisiga bogga weyn ee barteyda… Uma dulqaato inaan ku dhiso xiriiriyeyaasha gacanta.)
Dhinaca kale, waxaan ku arkay Roger Johansson 456BereaStreet si guul leh ugu guuleysato Amazon? (isagu waa naqshadeeye CSS aad u fiican) 🙂
Jul 3, 2007 markay ahayd 7:18 AM
Waxaan kula socday si isku mid ah, Doug.
Dhowr bilood ka hor, waxaan isku dayay inaan lacag ka helo mid ka mid ah Blogspots-kayga oo aan ku dhex dhaco isla dhibaatada. Sawirku muu soo muuqan! Haa, way ku kaftamayaan. 😈
Jul 9, 2007 markay ahayd 8:16 AM
Taasi waa talo weyn. Mahadsanid!
Aug 28, 2007 at 7: 54 AM
Whoops - Marwalba waan hagaajin jiray wadiiqooyinka sawirka anigoo u malaynaya inay ahayd bug. Weli, hadda ma isticmaalo iyaga, markaa waxaan qiyaasayaa inaysan qaylin karin.
Febraayo 29, 2008 saacadu markay tahay 12: 31 AM
Waxaan u hayaa sabab gebi ahaanba ka duwan sidii aan ku ogaan lahaa in Amazon Associates SUCKS. Adeeg aan waxtar lahayn oo aan dan ka lahayn daabacayaashooda. Waxaan ku soo qoray boggeyga .. Faafi warka!
Nov 9, 2008 at 2: 43 AM
Amazon Associates waxay leedahay adeegga macaamiisha ugu faa iidada badan adduunka. Waxay ku soo jawaabaan saddex maalmood gudahood laakiin jawaabahoodu waa INANE. Micno ma samaynayaan. Waxay u eg tahay inaysan xitaa ku mashquulin akhrinta waxaad ka walwalsantahay, kaliya waxay ku xanaaqayaan macluumaad aan faa'iido lahayn, aan caqli lahayn, oo aan qiimo lahayn Hal mar waxay iga codsadeen inaan u diro “macluumaadka ay codsadeen” laakiin xitaa waxba ma weydiin haba yaraatee.
Jun 25, 2008 at 7: 43 PM
Aniga mid ahaan, sida dakhliga ka soo xarooday Amazon Associates laakiin ma aqbali karin wax badan oo ku saabsan dhismaha xiriiriyaha. Aad ayaan uga xanaaqsanahay inta hoops ee ay tahay inaan ka boodo kaliya si aan u helo isku xirka alaabta.
Haddii aad rabto inaad isticmaasho mid ka mid ah wijiyadooda, waa neecaw. Laakiin markii aad rabto isku xirnaanta sheyga shaqsiga, waa xanuun boqortooyo.
Oktoobar 21, 2008 at 3:18 AM
Waxaad ka maqantahay qodob ka weyn sababta ay amazon wax fiican ugu qaban weydo dadka badankood.
Amazon waxay ku siineysaa oo kaliya daaqad 24 saac ah oo loogu talagalay soo-celintaada si aad u iibsato shey. intaa ka dib waxba ma helaysid.
80% dadku kuma iibsan doonaan 24 saacadood gudahood.
Waxaan ku tijaabinayaa qaar ka mid ah buugaagta ugu fiican amazon waxaanan helayaa guji fara badan.
Waxaan sidoo kale hubaa in dad badani ay wax uun ka iibsan doonaan iyaga laakiin 24 saacadood gudahood.
In 6%-kii iga baxay amazon uu helo macmiil cusub
Xusuusin, qaybta ugu adag amazon waxay kasbataa macaamil cusub oo mushahar qaata. Markay sidaa sameyso, waxbadan ayey kasameyneysaa inta uu noolyahay macaamilka.
Adduun ku habboon, waxaan heli lahaa qaddar guddi ah inta aan noolaa macaamiisha aan tixraaco.
Nasiib darrose, waxaan uun dirayaa taraafikada bilaashka ah ee 'amazon', oo waxba iskama samaynayo.
Jun 18, 2013 at 9: 18 PM
Amzagong waxay siin jirtay daaqad aan xadidneyn, laakiin maadaama dhamaan shirkadaha leh xanuunka sii kordhaya, waxay noqdeen dameer weyn GREEDY….
14, 2008 at 8: 25 PM
Waxaan u maleynayaa in Amazon Associates ay wali tahay tan ugu fiican. Hubso in qaar ka mid ah aaladaha wax yar yihiin, laakiin haddii aad tahay horumariye, runti waxay ku siinayaan dhammaan qalabka aad ugu baahan tahay inaad wax ku iibiso.
Jun 18, 2013 at 9: 16 PM
Badh-assed ma hab Mareykan baa?
Jun 17, 2009 at 3: 57 PM
Amazon.com Websaydhada Associates waa kaftan… Ma awoodo inaan ku cusbooneysiiyo cinwaankayga hoosta bogga lacagta-info.html. Dhibaato kuma ahan kumbuyuutarkeyga ama buskudka ama firewall-ka sida Amazon “taageero” u soo jeedisay. Waxay ii sheegeen inaysan jirin wax ay sameyn karaan oo iga caawin kara inaan ka cusbooneysiiyo cinwaanka North Carolina ee ku socda gobol kale. Marka, waxaan qiyaasayaa inaan xirayo xisaabaadkeyga Amazon Associate iyo dhamaan shaqadeyda hore ee aan usii gudbiyay atrash bin iyo Amazon ma heli doonto habeen kasta oo hurdo la'aan ah inay iga lumiso asxaabteeda KALIYA Sababtoo ah websaydhkoodu waa kaftan taageeradooduna way awoodaan ' xitaa cusbooneysii cinwaankayga! Mar dambe wax ka iibsan maayo Amazon.com!
Jun 17, 2009 at 4: 01 PM
Google Adsense waxay siisaa degelkeyga kumanaan US $ halka Amazon jusyt ay i siiso $ 7 - $ 12 bishii. Uma maleynayo inay taasi cadaalad tahay, waxaan dhaqso uga saari doonaa xiriiriyeyaasha amazon.
Jun 17, 2009 at 4: 31 PM
By the way, waxaan kaliya ogaaday in aan ka bixinayay taraafikada Amazon boggeyga weyn qiyaastii 6-8 sano hada mana aanan ogeyn in ID horey loo joojiyay - Amazon ma dhibsanin inay i xasuusiso inaan tooganayo iyadoo aan lahayn rasaasta… waxay si aamusnaan ah oo farxad leh kuqaateen dhamaan taraafikada iyo macaamiishii aan udiray xitaa diir naxli ah iguma ogeyn inaan xoogaa lacag ah kaheli karo…
Jun 17, 2009 at 6: 11 PM
Taageerada Amazon waxay i siisay cinwaanka emaylka soo socda ee loogu talagalay taageerada Barnaamijka Amazon Associates: assoc-1@amazon.com .Natiijada: “Cinwaanka waa ladiiday. Sababta: 550 ”. Hadda waxaan hubaa inaan ahay macmiil hore Amazon.com...
Jul 19, 2009 markay ahayd 11:32 AM
omg Andrew, miyaadan u maleynin inay wax jiraan markii aad aragtay wax dakhli ah oo ka soo gala Amazon bilo yar?
Sikastaba, sabab kale oo ay tahay inay ka fiirsadaan cusbooneysiinta adeegooda ayaa ah in xilligan aysan ku dhisneyn wax ka qabashada hoosaadka id (keyword tracking) shaqeynta kuwa anaga ah ee sameynaya PPC
Jun 18, 2013 saacadu markay ahayd 6:37 AM
Sidee ayaad u hagaajisay xiriirka? Waxaan la mid ahay dhibaato la mid ah isku dayaya in ay u link a on wordpress.